ကိုးရီးယားမှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး​ပြော​နေကြတဲ့အ​ပေါ်မှာ ပွင့်​လင်းစွာဖြင့်​ဒဲ့ပြန်​လည်​ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ရန်အောင် (ရုပ်​သံဖိုင်​) – Maythadin
မင်းသားကြီး ရန်အောင်ကိုတော့ ပရိတ်သတ်နဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် အားလုံးသိ ပြီး ဖြစ်ကြမှာပါနော်။ အခုချိန်ထိ လူပျိုကြီး ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ရန်အောင်ကတော့ အကယ်ဒမီ ဆုများစွာကို ရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပြီး
အခုချိန်ထိလည်း တက်သစ်စတွေ လေးစားအားကျ အတု ယူရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ ယခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ရန်အောင်ဟာ သူ့ရဲ့မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေပျံ့နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ဒီသတင်းကို မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ရန်အောင်က “အသားအရေကောင်းဖို့ Collagen သောက်ပါဆိုရင်တော့သောက်တယ်မျက်နှာမှာတော့ ခွဲစိတ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပရိသတ်တွေအထင်လွဲနေတာပါ ကျွန်တော ကိုရီးယားသွားပြီး Surgery လုပ်တယ်ပြောတယ် ကျွန်တော် Korea တော့သွားတယ် Surgery မလုပ်ဘူး စိုးစိုးနဲ့အတူတူသွားတာပေါ့ ဒါပေမယ့်စိုးစိုးလုပ်တယ် ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။
အမှန်တကယ်ကလုပ်ဖို့သွားတာပဲမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဟိုရောက်တော့ ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေ ရိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့လို့ ငြင်းခဲ့တာပါ စိုးစိုးကတော့လုပ်ဖြစ်တယ် ခွဲပြီးထွက်လာတော့ က မ္ဘာပျက်နေတာပဲအရမ်းတော့လည်းမနာပါဘူး။
သူကိုယ်က နာတတ်တာလည်းပါတယ် သူတို့ဆီ မှာ ကတော့ မိန်းကလေးတွေကားမောင်းလာတယ် ခွဲပြီးရင် သူတို့ကားသူတို့ကားမောင်းပြီး ပြန် ထွက်သွားတယ်။ စိုးစိုးကတော့ အပ်မြင်ရင်ကို အော်နေတာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဆိုတော့
သွားတာပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး မျက်နှာအသားအရေဆွဲတင်တာမျိုးတော့ လုပ်ဖြစ်တယ် လေး ငါးခြောက်လတခါလောက်ပေါ့ အဲ့ဒါတောင်မလုပ်ဖြစ်တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီ Facial Treatment တော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေထိန်းသိမ်းတာမျိုးပေါ့ သူတို့ပေးတဲ့ ဆေးတွေလည်း လိမ်း ဖြစ်ပါတယ် ကျန်တာတော့ ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူး”. လို့ ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အောင်ကတော့ ကိုးရီးယားမှာ
ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ် လုံးဝမဟုတ် ကြောင်း ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ခရက်​ဒစ်​
မငျးသားကွီး ရနျအောငျကိုတော့ ပရိတျသတျနဲ့ အထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ အားလုံးသိ ပွီး ဖွဈကွမှာပါနျော။ အခုခြိနျထိ လူပြိုကွီး ဘဝနဲ့ ဖွတျသနျးနတေဲ့ ရနျအောငျကတော့ အကယျဒမီ ဆုမြားစှာကို ရရှိထားတဲ့သူဖွဈပွီး
အခုခြိနျထိလညျး တကျသဈစတှေ လေးစားအားကြ အတု ယူရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။ ယခုရကျပိုငျးမှာတော့ ရနျအောငျဟာ သူ့ရဲ့မကျြနှာကို ခှဲစိတျပွုပွငျထားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှပြေံ့နှံ့လာခဲ့တာဖွဈပွီး
ဒီသတငျးကို မီဒီယာတှနေဲ့တှဆေုံ့ရာမှာ ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့တာ ပဲဖွဈပါ တယျ။ ရနျအောငျက “အသားအရကေောငျးဖို့ Collagen သောကျပါဆိုရငျတော့သောကျတယျမကျြနှာမှာတော့ ခှဲစိတျထားတယျဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး။
ပရိသတျတှအေထငျလှဲနတောပါ ကြှနျတော ကိုရီးယားသှားပွီး Surgery လုပျတယျပွောတယျ ကြှနျတျော Korea တော့သှားတယျ Surgery မလုပျဘူး စိုးစိုးနဲ့အတူတူသှားတာပေါ့ ဒါပမေယျ့စိုးစိုးလုပျတယျ ကြှနျတျောမလုပျဘူး။
အမှနျတကယျကလုပျဖို့သှားတာပဲမလုပျဖွဈခဲ့တာဟိုရောကျတော့ ဓာတျပုံတှဘောတှေ ရိုကျပွီးမှ ကြှနျတျောမလုပျခငျြတော့လို့ ငွငျးခဲ့တာပါ စိုးစိုးကတော့လုပျဖွဈတယျ ခှဲပွီးထှကျလာတော့ က မ်ဘာပကျြနတောပဲအရမျးတော့လညျးမနာပါဘူး။
သူကိုယျက နာတတျတာလညျးပါတယျ သူတို့ဆီ မှာ ကတော့ မိနျးကလေးတှကေားမောငျးလာတယျ ခှဲပွီးရငျ သူတို့ကားသူတို့ကားမောငျးပွီး ပွနျ ထှကျသှားတယျ။ စိုးစိုးကတော့ အပျမွငျရငျကို အျောနတောဆိုတော့အဲ့လောကျကွီးဆိုတော့
သှားတာပဲ ကြှနျတျောကတော့ မလုပျဖွဈခဲ့ပါဘူး မကျြနှာအသားအရဆှေဲတငျတာမြိုးတော့ လုပျဖွဈတယျ လေး ငါးခွောကျလတခါလောကျပေါ့ အဲ့ဒါတောငျမလုပျဖွဈတာတဈနှဈကြျောပွီ Facial Treatment တော့လုပျဖွဈပါတယျ။
အသားအရထေိနျးသိမျးတာမြိုးပေါ့ သူတို့ပေးတဲ့ ဆေးတှလေညျး လိမျး ဖွဈပါတယျ ကနျြတာတော့ ဘာမှမလုပျထားပါဘူး”. လို့ ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ရနျအောငျကတော့ ကိုးရီးယားမှာ
ခှဲစိတျပွုပွငျမှုတှေ လုပျခဲ့တယျဆိုတဲ့အပျေါ လုံးဝမဟုတျ ကွောငျး ဖွရှေငျးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။ ခရကျဒဈ